ပရိတ်သတ်တွေကို ကိုဗစ်ကနေ အနိုင်ယူလိုက်နိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါလိုက်တဲ့ မြန်မာဂုဏ်ဆောင် MMA ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်း – CharTake
ပရိတ်သတ်တွေကို ကိုဗစ်ကနေ အနိုင်ယူလိုက်နိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါလိုက်တဲ့ မြန်မာဂုဏ်ဆောင် MMA ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်း
chartake | July 17, 2020 | Cele News | No Comments
ပရိတ်သတ်တွေကို ကိုဗစ်ကနေ အနိုင်ယူလိုက်နိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်တဲ့ မြန်မာဂုဏ်ဆောင် MMA ချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်း
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် စပါးအုံးမြွေ နာမည်ကျော် MMA ချန်ပီယံ ကစားသမား အောင်လအန်ဆန်သည် COVID-19 ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံထားရလို့ အားလုံးက စိုးရိမ်နေကြတာ အထူးပြောစရာ လိုမယ်မထင်ပါဘူး ။
ဒီနေ့မှာတော့ အောင်လအန်ဆန်းက သူရဲ့ဆေးစစ်မှု အဖြေများအရ Covid-19 ပျောက်ကင်းသွားပြီးဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာက တစ်ဆင့် ကြေညာ လိုက်ပါတယ်။
သူရဲ့ လူမှုကွန်ယက် ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ အခုလိုရေးသားထားပါတယ် ။ ” အားလုံးကို သတင်းကောင်းတခု ပြောပြ ချင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ စနေနေ့က စစ်ဆေးထားတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ကိုဗစ်-၁၉ဗိုင်းရပ်စ် စစ်ဆေးချက် အဖြေအရ၊ကျွန်တော် ရောဂါကင်းစင်သွားပါပြီ!။
အခု ကျွန်တော် အရင်ကလိုပဲ လေ့ကျင့်မှုတွေ၊ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပုံမှန်ပြန်လည် လုပ်ဆောင် သွားတော့မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးလဲ ဒီအိပ်မက်ဆိုးကို မကြာခင် ကျော်လွှားနိုင် တော့မှာပါ။
Good news guys, Saturday coronavirus test result came back negative! We are back in business. We are going to get over this nightmare soon ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာကို ပရိတ်သတ်တွေအတွက် သတင်းကောင်းပါဘိုက်ပါတယ်နော် ။ Source ; Aung La Nsang Fb’s
Unicode … ပရိတျသတျတှကေို ကိုဗဈကနေ အနိုငျယူလိုကျနိုငျပွီးဖွဈကွောငျး သတငျးကောငျးပါလိုကျတဲ့ မွနျမာဂုဏျဆောငျ MMA ခနျြပီယံ အောငျလအနျဆနျး
မွနျမာ့ဂုဏျဆောငျ စပါးအုံးမွှေ နာမညျကြျော MMA ခနျြပီယံ ကစားသမား အောငျလအနျဆနျသညျ COVID-19 ရောဂါပိုး ကူးစကျခံထားရလို့ အားလုံးက စိုးရိမျနကွေတာ အထူးပွောစရာ လိုမယျမထငျပါဘူး ။
ဒီနမေ့ာတော့ အောငျလအနျဆနျးက သူရဲ့ဆေးစဈမ အဖွမြေားအရ Covid-19 ပြောကျကငျးသှားပွီးဖွဈကွောငျး သူ့ရဲ့ဖစျေ့ဘှတျချ စာမကျြနာက တဈဆငျ့ ကွညော လိုကျပါတယျ။
သူရဲ့ လူမကှနျယကျ ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနာမှာ အခုလိုရေးသားထားပါတယျ ။ ” အားလုံးကို သတငျးကောငျးတခု ပွောပွ ခငျြပါတယျ။လှနျခဲ့တဲ့ စနနေကေ့ စဈဆေးထားတဲ့ ကြှနျတျောရဲ့ကိုဗဈ-၁၉ဗိုငျးရပျဈ စဈဆေးခကျြ အဖွအေရ၊ကြှနျတျော ရောဂါကငျးစငျသှားပါပွီ!။
အခု ကြှနျတျော အရငျကလိုပဲ လကေ့ငျြ့မတှလေုပျငနျးဆောငျတာတှကေို ပုံမနျပွနျလညျ လုပျဆောငျ သှားတော့မပါ။ ကြှနျတျောတို့ အားလုံးလဲ ဒီအိပျမကျဆိုးကို မကွာခငျ ကြျောလှနိုငျ တော့မာပါ။
Good news guys, Saturday coronavirus test result came back negative! We are back in business. We are going to get over this nightmare soon ” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာကို ပရိတျသတျတှအေတှကျ သတငျးကောငျးပါဘိုကျပါတယျနျော ။ Source ; Aung La Nsang Fb’s
ဝေဘာဂီဆေးရုံကြီးတွင် အထူးလိုအပ်နေတဲ့ အောက်စီဂျင်အိုးများလှုဒါန်းကြဖို့ အလှူရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ ဦးကျော်သူ
ဆေးရုံမှအိမ်ပြန်ခွင့် ရပါပြီဟု ပရိတ်သတ်တွေကို ဝမ်းသာစရာ သတင်းကောင်းပြောပြလာတဲ့ ပရဟိတမင်းသားကြီး ဦးကျော်သူ